Fiidiyow: Sii, guuleysta, u kori si sax ah isdhexgalka | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 2, 2013 Khamiis, Juun 10, 2014 Douglas Karr
Mid ka mid ah furayaasha aan ku qeexnay ganacsigeenna ayaa ah in nooc gaar ah oo macaamiil ahi fure u yahay guusha macmiilka iyo sidoo kale kuweenna. Qaarkood waxay ku xiran yihiin ilaha dhaqaalaha, qaar waxay la mid yihiin warshadaha ay ku jiraan badankooduna waa aqoonsiga qiimaha iyo dib ugu noqoshada maalgashiga. Waxaan nahay 5 sano jir jirrabka dhowrka sano ee hore wuxuu ahaa inaan qaadano macmiil kasta oo saxiixi kara jeeg. Taa intaa ka badan samayn meeyno very aad ayaan uga taxaddaraa cidda na kireysa.
Marka loo eego baaxad weyn, waxaan aaminsanahay inay tani fure u tahay guusha shirkad kasta. Shirkado aad u tiro badan ayaa kaliya ku riixaya inay cidna qandaraas ka helaan, ka dibna ay ku habsadaan arrimaha taageerada, soo-celinta macaamiisha, biilasha iyo khilaafaadka adeegga, iyo is-qorista waxyaabaha laga filayo.
Xaqiiqda Isdhexgalka waa kafaala-qaade sidoo kale waxaan saaxiibo weyn la nahay shirkadda. Marka ganacsiyada ay raadinayaan codsi otomaatig ah oo suuqgeyn ah, inta badan dareenka waxaa la saaraa hoggaanno cusub, fangasyo iyo beddelaad. Dhibcaha waa la adeegsadaa, iyadoo la siinayo mudnaanta qaar ka mid ah barnaamijyada ama dabeecadaha ku xeeran macaamiisha… laakiin farqi weyn ayaa u dhexeeya caqligooda.
Farqigaas ayaa ah in nidaamyada otomaatigga badankood ay helaan dad diyaar u noqon kara inay saxiixaan… laakiin dhab ahaan ha isbarbardhigin hab dhaqanka iyo astaamaha macmiilkaaga hadda. Iyaguna dhag jalaq uma siinayaan habdhaqanka iyo astaamaha macaamiishaada hadda jira. Dhamaanteen waan ognahay inay ka qiimo badantahay wax ku oolnimada in la haysto macmiil hadda ah halkii laga raadin lahaa mid cusubna laga raadin lahaa.
Suuqgeyntu kuma saabsana tirada booqdayaasha, horseedka ama xitaa beddelaadaha aad haysato. Suuqgeynta weyni waxay ku saabsan tahay fahamka cidda ay yihiin macaamiishaadu, helitaanka inbadan oo iyaga la mid ah, ku sii wad iyaga farxad, iyo kobcinta xiriirka iyaga la leh. Xuquuqda Interactiveive waxay dhahdaa si fiican… Guul, Sii, Koboc.
Soo Degso Midig Interactive eBook, Waa maxay Suuq geynta nolosha hadda!
Tags: 3d goolalqalabayntahaynta macaamiishaSuuq geynta noloshahayntasaxda ah is-dhexgalkadhibcaha
Thanks Douglas, waa inaan hubiyaa tan.